#Atomicchat: Votoatiny ampiasain'ny mpampiasa | Martech Zone
#Atomicchat: Votoatiny ampiasain'ny mpampiasa
Alahady, Jona 15, 2014 Douglas Karr
Raha ianao araho aho ao amin'ny Twitter, nanana fotoam-pifanakalozan-dresaka mahafinaritra izahay niaraka tamin'ireo olona ao amin'ny Atomic Reach miresaka momba ny atiny ampiasain'ny mpampiasa (UGC). Ireto ny hevi-dehibe sy fitadiavana lakilasy Resadresaka Twitter #AtomicChat, nampiantrano isaky ny alatsinainy alina amin'ny 9 alina EST / 8pm CST / 6pm PST. Araho @Atomic_Reach ho an'ny fanavaozana ny varotra atiny rehetra!
Fohy ho an'ny ny votoatin'ny mpampiasa, UGC no teny ampiasaina hamaritana ny atiny rehetra toy ny horonan-tsary, bilaogy, lahatsoratra endrika fifanakalozan-kevitra, sary nomerika, raki-peo, ary endrika haino aman-jery hafa noforonin'ny mpanjifa na mpampiasa farany ny rafitra na serivisy an-tserasera ary azo ampahibemaso ho an'ny hafa ny mpanjifa sy ny mpampiasa farany. Ny atiny ateraky ny mpampiasa dia antsoina koa hoe consumer generatedmedia (CGM). Webopedia
Misaotra Atomic Reach ho an'ny fotoana tsara hafa iray hafa!
Tags: fahatongavan'ny atomaatomicchatdouglas karrdouglaskarrchat tweetTwitterchat amin'ny twitterugcatiny novokarin'ny mpampiasa
Google Analytics: Aza manoratra tsindry Subdomain ho bouncing
GoDaddy: avelao any aoriany ny baoty ary mandaka ny boriky